Akụkọ - Otu esi ewepụ epoxy, gluu, mkpuchi si n'ala kọmpat
Epoxies na ihe mkpuchi ihe ndị ọzọ dị ka ya nwere ike ịbụ ụzọ mara mma ma dịgidere iji chebe ihe gị mana iwepụ ngwaahịa ndị a nwere ike isi ike. Ebe a na-akwado gị ụzọ ụfọdụ nwere ike melite arụmọrụ ọrụ gị nke ukwuu.
Nke mbụ, ọ bụrụ na epoxy, gluu, agba, mkpuchi na-ekpuchi ala gị adịghị oke mkpa, dị ka n'okpuru 1mm, ị nwere ike ịnwale iji. Metal Bond diamond egweri akpụkpọ ụkwụna akụkụ akụkụ dị nkọ, dị ka akụkụ akụ, akụkụ rhombus na ihe ndị ọzọ, iji mee ka ịdị nkọ dịkwuo mma, ọ ka mma ịhọrọ otu akụkụ na-egweri akpụkpọ ụkwụ. Anyị na-eme ụdị akpụkpọ ụkwụ dị iche iche maka igwe dị iche iche, dịka ọmụmaatụ, Husqvarna, HTC, Lavina, Werkmaster, Sase, STI, Terrco wdg, ọrụ ODM / OEM dị maka anyị.
Nke abụọ, Ọ bụrụ na epoxy na ala elu bụ a bit oké, n'oge 2mm ~ 5mm, Ị nwere ike na-agbalị iji Ngwa PCD Gringiji dozie nsogbu ahụ. Polycrystalline Diamond (PCD) bụ grit diamond nke ejikọtara ọnụ n'okpuru nrụgide dị elu, ọnọdụ okpomọkụ dị elu na ọnụnọ nke ígwè catalytic. Tụnyere akpụkpọ ụkwụ igwe egweri ọdịnala, ha agaghị ebuli ma ọ bụ mebie mkpuchi ahụ; Ngwa PCD egweri bụ otu n'ime ngwaahịa kachasị dị elu maka iwepụ mkpuchi, ha nwere ike ịchekwa oge na ụgwọ ọrụ gị ngwa ngwa; ha nwere ogologo ndụ ogologo oge, belata ọnụ ahịa akụrụngwa gị nke ukwuu. Enwere ike ịhọrọ nha PCD na ọnụọgụ akụkụ dị ka arịrịọ gị.
Nke atọ, Ọ bụrụ na epoxy dị oke oke, enwere ike iji igwe gbawara agbawa wepụ akwa akwa epoxy na ihe mkpuchi / agba ndị ọzọ sitere na ala simenti. Igwe mgbawa agbawa na-eji obere pellet metal gbawara n'elu kọmpụta, na-ewepụ mkpuchi ọ bụla isi ike. Igwe ndị a na-emegharị ogbunigwe nke na-ebelata ihe mkpofu. Ha nwekwara sistemu agụụ na-ekpo ọkụ ka ewepụrụ ọtụtụ uzuzu. Nke a bụ otu n'ime ụzọ kachasị mma na ngwa ngwa iji wepụ akwa mkpuchi mkpuchi n'elu ala simenti. Akụkụ dị ala nke iji igwe ndị a bụ na ha na-ahapụ n'ala ụdị ihe siri ike dị ka ụzọ ámá nke mere na a ga-ekpochasị ihe ka ukwuu n'ime ime ụlọ mgbe ejiri ya.
N'ikpeazụ, ọ bụrụ na ị na-enwe nsogbu na-esi wepụ epoxy, mkpuchi, glues si kọmpat n'elu, biko egbula ịkpọtụrụ anyị, anyị nwere ike na-enye ndị kasị mma ngwaọrụ iji dozie ya.